Nissan March 2010 (#726542) ကို Thanlyin ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင... | CarsDB
Lot Number: #726542
ဆီစားလည်းသက်သာ မြို့ထဲအဝင်အထွက်လည်းလွယ်ကူ ကားလန်းလန်းလေးလည်းစီးချင်သူများအတွက် အိမ်စီးကားလေးတစ်စီးရောင်းချပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
#Model. - 2010
#Colour. - Violet
#Engine. - 1200 CC ... 2WD
#Kilo. - 1 သိန်း စွန်းစွန်း
-> #Original TV & Back Camera ...All Power Window ... စာကြည့်မီး... Spare wheel နှင့် ကားပစ္စည်းစုံ ... နောက်ရေသုတ်တံ ... မီးချိန်မှန်ချိန်... မှန်ချိုးမှန်ခေါက် ...အောက်ကြမ်းခင်းLeatherခင်းပီး ... Tyre 80% Good ...
#Push Start (Smart Key)
#Original March ​ခြေ​ချော်ပတ်လည်
#Originalဘက်မှန် Auto အဖွင့်အပိတ်
#လိုင်စင်ဝေး (၂၀၂၁... ၉ လပိုင်း)
#Engine Oil / Auto Oil / Coolant / Air Cleaner အားလုံးအသစ်(လက်တင်စီး)
#အတိုက်အခိုက် အရှုပ်အရှင်း ကင်းကြောင်း အာမခံပါသည်..အိမ်စီးကားသန့် တစ်လက်ကိုင် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်..
Price - 152 သိန်း (ပါးပါး ညှိုနှိုင်း)
09 254 255 129
09 769 110 180
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Pyae Phyoe မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Nissan March 2010 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။